Ndị ahịa anyị, Lifeline Data Centers, bụ ndị mba ụwa ghọtara dị ka onye ndu na ihe ọhụrụ na ụlọ ọrụ data data na ndị ọkachamara na nchekwa. N'ezie, ha bụ ụlọ ọrụ data nzuzo nke ruru ọkwa kachasị mkpa nke nchekwa gọọmentị etiti chọrọ - FEDRamp. Onye nchoputa Rich Banta bu otu n’ime ndi okacha mara amara n’uwa. Yabụ, kama ịhazigharị akwụkwọ niile ahụ, Rich na-akwado usoro nkọwa nke otu anyị na-akọ banyere ya wee dee ya. Ihe nlele - Nọmba 800-53.